Super Star Nagarjuna Iyo Samantha Wada Sheekeysiga Whatsapp Ku Dhax Maray Maxay ka Wada Hadleen - Hablaha Media Network
Super Star Nagarjuna Iyo Samantha Wada Sheekeysiga Whatsapp Ku Dhax Maray Maxay ka Wada Hadleen
HMN:- Super Star Nagarjuna wuxuu aad ugu mashquulsan filimka uu maal giliyaha ka yahay sido kalena wiilkiisa Naga Chaitanya Iyo Rakul Preet Singh hogan iyaaa ka yihiin ee ‘Rarandoi Veduka Chudam’.
Filimkaan ayaa goos gooskiisa maalmo ka hor lasoo bandhigay wuxuuna noqday goos goos aad looga helay filimkaan ayaana ah mid jaceyl iyo filim ka hadlaayo arimaha qoyska.
Maadaama Samantha Ruth Prabhu tahay jaceylka Naga Chaitanya sido kalena noqan doonto xaaskiisa ayaa aad ugu heshay goos goos filimka Rarandoi Veduka Chudam.
Super Star Nagarjuna ayaa wada sheekeysiga asiga iyo Samanth ku dhax maray Whatsapp wuxuu kusoo bandhigay Twitter-kiisa asigoo screenshot kasoo qaaday mobilkiisa.
Nagarjuna ayaa ugu horeyn Samantha ku wacay ‘Kodala’, Samantha ayaa ugu jawaabtay ‘Love Mama’, ka dib waxay dhahday waan ka helay goos gooska wax walbana waa shaqadaaada Wuxuu isaga u muuqda mid caajiib ah iyo wax walbo oo shaqada ah aad ayaan ugu faraxsanahay waana ku mahadsan tahay”.
Wada sheekeysiga maanta dhax maray gabadh iyo sodageeda ayaa social media looga hadal heeyay waxaana la hubaa in Samanth ay dhamaadka sanadkaan la aqal gali doonto jaceylkeeda Naga Chaitanya.